विश्वकै ठूलो टापु किन्ने ट्रम्पको मनशाय, संसार चकित - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com विश्वकै ठूलो टापु किन्ने ट्रम्पको मनशाय, संसार चकित - खबर प्रवाह
विश्वकै ठूलो टापु किन्ने ट्रम्पको मनशाय, संसार चकित
एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सम्पत्ति कारोबारका क्षेत्रमा ठूलो नाम छ । उनले विश्वका विभिन्न मुलुकमा सम्पत्ति खरिद गरी विशाल भवन, होटेल, गल्फकोर्स बनाएका छन् । तर, पछिल्लो समय ट्रम्पले विश्वको सबैभन्दा ठूलो टापु नै खरिद गर्ने मनशाय व्यक्त गरेका छन् ।
ट्रम्पले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टापु ग्रिनल्याण्ड डेनमार्कबाट खरिद गरेर अमेरिकामा गाभ्ने मनशाय व्यक्त गरेपछि अहिले सारा संसार चकितमा परेको छ ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना साथीहरुसँग भोजन गर्ने क्रममा संसारकै सबैभन्दा विशाल टापु ग्रिनल्याण्डलाई डेनमार्कसँग खरिद गरी अमेरिकामा गाभ्ने मनशाय व्यक्त गरेका थिए ।
उनले आफ्ना सल्लाहकार तथा साथीहरुसँग रात्रीभोजका क्रममा ‘केही हदसम्मको गम्भीरताका साथ’ ग्रिनल्याण्ड खरिद गर्ने कुरा गरेका थिए । त्यस रात्रीभोजमा सहभागीहरुले ट्रम्प ग्रिनल्याण्ड खरिद गर्न गम्भीर छन् वा उनले मजाक गरिरहेका छन्, भन्ने छुट्याउन नसकेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमको भनाइ छ ।
यता डेनमार्कको स्वशासित क्षेत्र ग्रिनल्याण्डले भने अमेरिकी राष्ट्रपतिको मनशायको चर्को आलोचना गरेको छ । ग्रिनल्याण्डको प्रशासनले ‘आफूहरु व्यापारका लागि खुला रहेको तर, टापु नै बिक्री गर्न भने कदापी तयार नरहेको’ टिप्पणी गरेको छ । अर्कोतर्फ डेनमार्कका पूर्व प्रधानमन्त्री लार्स लोके रस्मुसेनाले पनि ट्वीट गर्दै यसलाई ‘अप्रिल फूलको मजाक’ को संज्ञा दिँदै यसको सम्भावना नरहेको जनाएका छन् ।
के हो ग्रिनल्याण्ड ?
आन्ध्र महासागरको उत्तरमा रहेको ग्रिनल्याण्ड विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टापु हो । ग्रिनल्याण्ड डेनिस अधिराज्य अन्तर्गतको स्वतन्त्र क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । केबल ५६ हजार जनसङ्ख्या रहेको ग्रिनल्याण्डको अधिकांश हिस्सा हिउँले ढाकिएको छ । यहाँ युरेनियम, कोइला, जिंक, तामा, फलाम लगायतका खनिज पदार्थको ठूलो भण्डार रहेको विश्वास गरिन्छ ।
यहाँ आत्महत्या, बेरोजगारी तथा मद्यपान सेवन पनि अत्यधिक हुने गरेको छ । यसअघि सन् १८६७ मा पनि तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति एण्ड्रियू जोनसनले ग्रिनल्याण्ड खरिद गर्नेबारे चासो देखाएको अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । यद्यपि पछिल्लो समय सन् १९४६ मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रयुमनले भने औपचारिक रुपमा नै डेनमार्कसँग १० करोड अमेरिकी डलरमा ग्रिनल्याण्ड खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव डेनमार्कले अस्वीकार गरेको थियो ।
इतिहासमा अमेरिकाले विभिन्न मुलुकहरुसँग भूमि खरिद गर्दै आएको छ । अमेरिकाले सन् १८०३ मा फ्रान्सबाट २१ लाख वर्गकिलोमिटरको लुइजियानाको भूमि १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा खरिद गरी आफ्नो मुलुकमा गाभेको थियो । त्यस्तै, सन् १८६७ मा रुससँग ७२ लाख अमेरिकी डलरमा अलास्का खरिद गरेको थियो । त्यस्तै, सन् १८९८ मा स्पेनसँग २ करोड डलरमा फिलिपिन्स खरिद गरेको थियो ।
पछिल्लो समय सन् १९१७ मा डेनमार्कसँग २ करोड ५० लाख डलरमा वेष्ट इण्डिजमा रहेका टापुहरु खरिद गरी भर्जिन आइल्याण्ड नामकरण गरेको थियो ।
यस्तो शहर जहाँ ४० दिनसम्म सूर्योदय नै हुँदैन
ल्यापटप तातेर हैरान हुनुभएको छ ? यसरी गर्नुहोस् सहज तवरले काम
एजेन्सी– बलिउड नायिकाहरु अभिनय मात्र नभई सुन्दरताको कारण पनि चर्चामा हुने गर्छन्। फेसन, सुन्दरता र अभिनयले गर्दानै बलिउड अहिलेको स्थानमा पुगेको हो। बलिउडमा रहेका नायिकाहरु विश्वकै सुन्दर नायिकाहरुको सूचीमा पर्ने गर्छन्। आकर्षक आँखाले सुन्दरतालाई सिधै परिस्कृत गर्छ। बलिउडमा यस्ता नायिकाहरु पनि छन्। जसको आँखा एकदमै सुन्दर छ। सबै भन्दै सुन्दर आँखा हुने बलिउड नायिकाहरु निम्न […]
मोबाइलको मोमोरी छिटो भरिएर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् छुटकारा पाउने उपाय
एजेन्सी – आजकल धेरैजसो मानिसहरूमा स्मार्ट फोनको आकर्षण छ । धेरै स्टोरेज क्षमता, गतिलो फोटो खिच्न सक्ने त हेर्दा आकर्षक मोबाइल अधिकांशको रोजाईमा पर्छ । तर, बल्लतल्ल खरिद गरिएको र आकर्षक भनिएको मोबाइलको मेमोरी पनि छिटै भरिएर मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता तनावमा पर्छन् । विज्ञापन कहिलेकाहिँ त त्यस्तो समय हुन्छ जब फोटो क्लिक गर्न चाहन्छौं तर […]
काठमाडौं – धेरै समय काम गर्दा ल्यापटप कम्प्युटर लगायतका सामग्री तातेर कामै गर्न नसक्ने अवस्थाले सायद तपाई पनि समस्यामा पर्नु भएको होला । अझ गर्मीको समयमा अधिक प्रयोगले ल्यापटप तात्ने समस्या बढ्दो हुन्छ । ल्यापटप तातिने अनेकौँ कारणमा पुरानो हुनु पनि एउटा कारण हुन सक्छ । ल्यापटप पुरानो भएको छ भने भरसक त्यसलाई प्रयोग नगर्नु […]
एजेन्सी– रुसको मुर्मान्स्क शहरमा वर्षको ४० दिनसम्म सूर्योदय हुँदैन । २ डिसेम्बरबाट १० जनवरीसम्म त्यहाँका बान्दिाहरुले सूर्योदय नै देख्न पाउँदैनन् । ३ लाख बढी जनसंख्या रहेको उक्त शहरका मानिसहरुले ४० दिनसम्म सूर्यको दर्शन गर्न नपाउँदा अन्धकारमै बिताउनु पर्ने हुन्छ । खासमा मुर्मान्स्क शहर सुमेरु वृत्त अर्थात् आर्कटिक सर्कलभित्र पर्छ । आर्कटिक सर्कल पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा […]
अगष्ट १८ देखि हुने सीपीएलमा सन्दीपले यस सिजन जमैका तल्लावाहजबाट खेल्नेछन् । प्रतियोगिताअघि सबै खेलाडी त्यहाँ पुगेर दुई साता क्वारेन्टिन बस्नुपर्नेछ । बिहीबार उडे पनि लामिछाने आइतबार मात्र ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो पुग्नेछन् । यसका लागि उनले नेपालबाट कोरियन एअरलाइन्सको चार्टर्ड विमानमार्फत कोरिया, त्यहाँबाट अमेरिका हुँदै ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोको हवाई यात्रा तय गर्नुपर्नेछ । ‘त्यहाँ पुगिसकेपछि […]